Kana iwe ukashandisa iyo Apple Mail app uye uchida kuichengetedza, shandisa iyo nyowani DuckDuckGo | Ndinobva mac
Kana iwe ukashandisa iyo Apple Mail app uye uchida kuichengetedza, shandisa iyo nyowani DuckDuckGo sevhisi
Ini ndinoedza kutaura kuti tese tinoziva dhadha rine mukurumbira paInternet. Haasi Donald, ibasa raanotipa DuckDuckGo. Kana iwe uchida kuvanzika uye usingaonekwe paunotsvaga, sevhisi iyi inoita basa rakanaka uye rinoshanda. Hatigoni kuzvidemba nemaitiro aanoita zvinhu. Ikozvino yakagadzirawo mashandiro matsva ayo iko kushandiswa kweedu kwazvino Apple tsamba kunotichengetedza. Pamwe pane iyo Mac kana chero imwe kifaa. Basa reBeta raunogona kutoedza.
DuckDuckGo Yakazivisa kuti iyo app ichavhura yayo nyowani ficha email kudzivirirwa mune beta vhezheni. Iri basa rinodzivirira kuvanzika kweemail pasina kushandura masevhisi kana Anopa App iyo tsamba iwe yauri kushandisa. Ndokunge, kana iwe ukashandisa iyo Apple inopa kubva kuMac yako kana chero kupi, DckDuckGo ichakubatsira iwe kuchengetedza ako mameseji kubva pakuteedzera.
Asi ndeyekuti mukuwedzera, DuckDuckGo zvakare inopa yega email kero @ duck.com kune vashandisi vayo, iyo zvakare ichakwanisa kuburitsa yakasarudzika yega maemail kero muapp. Chimwe chezvinhu zvakanakisa ndechekuti email yekuchengetedza basa ndeyekuti Apple inoisanganisa neICloud +. Kune vashandisi vakabhadharwa mune chero eeshanduro nhatu idzo kambani iri muICloud, ivo vanozogona kushandisa Yakavanzika Chaizvoizvo. Encrypt yako data sekuonekwa kwayo pawebhu. Vachave zvakare ne Hide Email Email basa rinokutendera kuti utumire akasarudzika uye akasarudzika maemail kuaccount yako huru, uye zvakare uve neKeKit yakachengeteka mavhidhiyo makamera.
Isu tinofara kuzivisa kuburitswa beta kweDuckDuckGo Email Kudzivirirwa. Yedu yemahara email yekutumira sevhisi inobvisa maemail trackers uye inodzivirira zvakavanzika zveyako email kero Pasina kukumbira iwe kuti uchinje maemail services kana maapplication. Mazhinji emhinduro dziripo dzeemail dzakavanzika dzine zvazvakanakira nekuipira. Iwe unofanirwa kushandura maemail masevhisi kana maapplication zvachose, kana kudzikisira ruzivo rwako rweemail nekuvanza mifananidzo yese. Isu tinotenda kuti kuchengetedza ruzivo rwako pachako kubva mukuburitswa kune vechitatu mapato kunofanirwa kuve nyore uye kusinganetsi, senge yakasara yeDuckDuckGo yekuchengetedza zvakavanzika suite.
Inonyanya kubatsira mune iwo masayiti atinofunga anogona kutitumira spam kana kugovana yedu email kero. Nekutipa email yakavanzika kero, tinogona kugadzirisa zvese izvi. Hongu, ikozvino, Vashandisi vanogona kungojoinha kujoina yakavanzika yakamirira rondedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Kana iwe ukashandisa iyo Apple Mail app uye uchida kuichengetedza, shandisa iyo nyowani DuckDuckGo sevhisi
Iyo 2022 Mac Pro icharamba iine Intel processor
Runyerekupe runoratidza kuti iMac hombe yakanonoka kusvika gore rinouya